Outlook နဲ့အကောင့်သို့ဝင်ပါ | Outlook ကိုဝင်မည် - အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်အဆင့်
သင့်ရဲ့ Outlook နဲ့အကောင့်ကိုတီးပွီး, အဆိုပါဖြည့်စွက်ရန်ဤ post ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် Outlook ကိုဝင်မည်ဖြစ်စဉ်ကို. ထိုအသင်ပထမဦးဆုံးသေးထို့နောက်သင့် Outlook နဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်အကောင့်ကိုဖန်တီး ဒီမှာ. ငါသည်သင်တို့ကိုအလွယ်တကူစေရန်ကူညီပေးသည်သောငါ၏အသိပညာ၏အကောင်းဆုံးနှင့်အတူဖန်တီးဤဆောင်းပါး Outlook နဲ့အကောင့်သို့ဝင်ပါ.
သင့်အနေဖြင့်ဖြည့်စွက်ရန်ဤဆောင်းပါးဂရုတစိုက်ဖတ်ပါရန်ရှိသည် Outlook ကိုဝင်မည် ဖြစ်စဉ်. ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုအားဖြင့်ခြေလှမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်အောင်မြင်စွာကဖြည့်စွက်ရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ် သင့်ရဲ့ Outlook နဲ့အကောင့်ထဲသို့မဝင်ရ. ဒီ post ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ရဲ့ login page ကိုရိုက်ထည့်ဖို့တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်များပါဝင်သည်.
ဒီနေရာတွင် ပတ်သက်. စစ်မှန်သောနှင့်သင့်လျော်သောသတင်းအချက်အလက်များအရ Outlook နဲ့အကောင့် login လုပ်နည်း. ဒီရဲ့ login လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်ဖို့လိုအပ်နှစ်ခုအဓိကအမှုအရာရှိပါသည်သင့်ရဲ့ဖြစ်ပါသည် username နှင့် Password ကို သင်သည်သင်၏ Outlook နဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးသောအခါအရာကိုသင်လက်ခံရရှိ.
Outlook ကိုဝင်မည်လုပ်ငန်းစဉ် | အဆင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်
အောက်က Follow Outlook နဲ့အကောင့်သို့သင်္ကေတပြဘို့ခြေလှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောခြေလှမ်းဖော်ပြထားခြင်း. အောင်မြင်စွာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်.
ပဌမ, တရားဝင် Outlook ကိုဝင်မည်စာမျက်နှာရိုက်ထည့်ရန်ပေးထားသောလင့်ခ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ: www.outlook.com
ယခု, သငျသညျတရားဝင် Outlook နဲ့ website ကိုဝင်ကြ၏. အဆိုပါပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ “ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း” ကြယ်သီး.
ထိုနောက်မှအီးမေးလ်ရိုက်ထည့်ပါ, ဖုန်းကို, သို့မဟုတ်ပေးထားသောအာကာသအတွင်း Skype ကိုဂရုတစိုက်နှင့်စာနယ်ဇင်း “နောက်တစ်ခု”.
ယခု, သင်အာကာသထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်စာနယ်ဇင်း၌သင်တို့၏ Password ကိုရိုက်ထည့်ရန်ရှိသည် “ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း”.
သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာသင့်ရဲ့ Outlook နဲ့အကောင့်ရိုက်ထည့်ပါဦးမည်.
ယခု, သငျသညျ Outlook နဲ့ပေးအပေါငျးတို့သကွဲပြားခြားနားသော features တွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်.
ဤသည်ကိုသင်အကြောင်းကို get ကိုအကောင်းဆုံးဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် Outlook ကိုဝင်မည်ဖြစ်စဉ်ကို. ဤတွင်ကျွန်မတပြင်လုံးကိုဖြစ်စေကြပြီ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Outlook နဲ့သင်္ကေတပြ ခြေလှမ်းပုံစံအားဖြင့်ခြေလှမ်းကို အသုံးပြု. ဒါရိုးရှင်းတဲ့. ရုံခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်, တိုက်ရိုက်တရားဝင်စာမျက်နှာရိုက်ထည့်ဖို့ link ကိုအသုံးပြု.
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းသို့မဟုတ်မေးမြန်းမှုရှိလျှင်ပင်ဖော်ပြထားခြင်းမှတ်ချက်အကွက်အောက်ရှိသုံးပြီးအပ်ဒီ post အကြောင်းကိုသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုမျှဝေရန်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာပုံမှန် update ကို get www-hotmail-com.email.
အောက်မှာ Filed: လော့ဂ်အင် အတူ Tagged: အလားအလာအကောင့် login လုပ်နည်း, Outlook ကိုရဲ့ login ဖြစ်စဉ်ကို, Outlook ကိုအတွက် Sign